Lakabyada maqaarka: maxay yihiin, maxay u yihiin iyo sida loo daryeelo | Ragga Stylish
Lakabyada maqaarka (epidermis, dermis, iyo hypodermis) ayaa ah xubinta ugu weyn jirka. Ogaanshaha iyaga iyo barashada sida loo daryeelo waxay leeyihiin labadaba bilic iyo abaalmarin caafimaad.
Marka xigta, waan sharraxaynaa waxa lakab kasta loogu talagalay iyo waxa aad sameyn kartid si aad ugu ilaaliso caafimaad qabka iyo gabowga gabowga:
1 Maxay yihiin lakabyada maqaarku?
2 Sida loo daryeelo maqaarka
2.1 Ka ilaali naftaada shucaaca UV
2.2 Qaado caadooyin caafimaad leh
2.3 Abuur nidaam nadaafadeed oo adag
Maxay yihiin lakabyada maqaarku?
Epidermis waa midka ugu horreeya lakabyada maqaarka, iyo weliba kan ugu khafiifsan. Bixinta ka hortagga difaaca, waxaa ku yaal melanocytes, unugyo gaar ah oo soo saara melanin midabka leh. Marka Waa qaybta ay mas'uuliyadda soo saarista midabka maqaarku ku taal.
Waxaa loo qaybiyaa shan sublayer. Lakabka ugu sarreeya waa stratum corneum (stratum corneum), taas oo waxaa ku jira unugyo dhintay. Qaarkood si dabiici ah ayaa looga saaraa, halka kuwa kale ay u baahan yihiin adeegsiga walxaha qarxa. Qeybaha kale ee sublayers waa stratum lucid (stratum lucidum), stratum granulosa (stratum granulosum), stratum spinosum (stratum spinosum) iyo stratum basalis (stratum basale).
Lakabka labaad ee maqaarka waxaa loo yaqaan dermis. Maaddaama ay ku jirto kolajka, elastin iyo hyaluronic acid, wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta maqaarka jilicsanaan iyo jilicsanaan. Waa in la ogaadaa in maqaarku sidoo kale ka kooban yahay timaha timaha, xididdada dhiiga, qanjidhada qanjirada, iyo neerfaha taas oo suurtogal ka dhigaysa in la taabto lana arko kuleyl iyo qabow.
Waa kan saddexaad iyo kan ugu dambeeya ee lakabyada maqaarka. Hoos u dhigista nudaha noocan ah ee loo yaqaan 'adipose unug' ayaa sababa hoos u dhaca iyo laalaabka. Waxay sidoo kale leedahay qanjidhada dhididka waxayna leedahay hawsha ilaalinta kuleylka iyo ilaalinta xubnaha muhiimka ah.
Sida loo daryeelo maqaarka
Markay sannaduhu dhammaadaan, isku-darka kolajka, elastin iyo hyaluronic acid ayaa yaraada. Sidoo kale, waxaa ku yaraanaya dufanka wajiga. Dhammaan hawlahan lama-huraanka ah ee ku jira lakabyada kala duwan ee maqaarku waxay keenaan muuqaalka duuduubnaanta iyo xoqitaanka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn kartid si aad uga dhigto duuduubka adkaanta:
Ka ilaali naftaada shucaaca UV
Si maqaarku u caafimaad qabo gudaha iyo dibaddaba aad ayey muhiim u tahay inaadan si aad ah naftaada ugu soo gaadhin shucaaca UV, maadaama ay sababi karaan dhibco iyo duuduub, iyadoo kansarrada maqaarku ay yihiin saameyntooda ugu daran ee ugu xun. Marka lagu daro isticmaalka muraayadaha qorraxda leh SPF 30 ama ka sareeya (nasiib wanaag, qoyaan-qoraha badankood waxay horay ugu haysteen qaaciidadooda), waxaa jira talooyin kale oo ay tahay in lagu xisaabtamo. Oo ma aha oo keliya xagaaga, laakiin sanadka oo dhan:
Ku daboolida maqaarkaaga dharka markaad banaanka joogto
Xidho koofiyado iyo muraayadaha indhaha
Iska ilaali sariiraha maqaarka
Dhinaca kale, maqaarku wuxuu si dabiici ah u soo saaraa fiitamiin D-ga marka uu si toos ah ula xiriiro falaaraha qorraxda. Faytamiin D wuxuu ka qayb qaataa nuugista kaalshiyamka jirka. Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay inay door ka ciyaareyso kahortaga cudurada sida waallida iyo noocyada kansarka qaarkood.
Si kastaba ha ahaatee, dhakhaatiirta maqaarku waxay kugula talinayaan in laga helo fiitamiin D-ga cunnada halkii qorraxda loo gudbin lahaa. Salmon, tuna, ukunta, iyo boqoshaada ayaa ka mid ah ilaha dabiiciga ee ugu wanaagsan nafaqadan. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa qiyaastaada maalinlaha ah ee fitamiin D adoo u maraya caano xoog leh iyo badarka, iyo sidoo kale iyadoo la kaashanayo nafaqeynta nafaqada leh.
Qaado caadooyin caafimaad leh
Saamaynta caadooyinka qaar ayaa ka muhiimsan kuwa kale, laakiin ficil ahaan waxkastoo aad sameyso maalintii oo dhan waxay saameeyaan xaalada maqaarkaaga. Tababbarka ugu yaraan saddex jeer usbuucii, hurdo 7-8 saacadood maalintii, iyo cunista cunto dheellitiran ayaa ka mid ah caadooyinka waxtarka leh. Kuwa waxyeelada leh waa tubaakada, ku xadgudubka khamriga, nolol fadhiga iyo walbahaarka.
Haddii aad ku nooshahay nolol caafimaad leh oo aad rabto in maqaarkaagu noqdo mid xitaa jilicsan oo qoyan, tixgeli inaad kordhiso jiritaanka asiidh dufan omega iyo antioxidants-ka cuntadaada. Waxaad uga heli kartaa cunnooyinka soo socda:
Kalluunka buluuga ah
Abuur nidaam nadaafadeed oo adag
Nadiifinta iyo fuuq celinta maqaarka maalin kasta waa muhiim. Waxaa ka mid ah nadiifiyeyaasha, xoqida, kareemada indhaha, kareemka huurka, serums-ka iyo qoyaan-jirka jirkaaga ku jira qalabkaaga daryeelka shaqsiyeed.
Nadiifiyeyaasha ayaa ka qaada wasakhda iyo isku soo uruura jirka. Waxay u daayaan maqaarka iyagoo diyaar u ah inay soo nuugaan inta ka hartay alaabada nadaafaddaada joogtada ah. Isticmaal biyo diirran oo ku beddel nadiifiye qashinka (waxay noqon kartaa mid jidheed ama kiimiko ah) 1-2 jeer usbuucii si aad uga saarto unugyada dhintey nadiifin dhammaystiran.
Kareemada indhaha waxay ka hortagaan wareegyada madow iyo cagaha cagaha, kuwaas oo ah astaamaha ugu horreeya ee wajiga gabow. In kasta oo rag badani ka boodaan tallaabadan, haddana runta ayaa ah inay wax weyn ka beddeli karto markay timaado maqaarka wajiga iyo muuqaalka guud.
Qoyaanka ayaa ka caawiya inuu maqaarku noqdo mid jilicsan oo dhalaalaya. Sida ugu macquulsan, waxay sidoo kale dib u dhigaan muuqaalka astaamaha gabowga. Maalin, habeen iyo jidhba waa saddexda nooc ee kareemka loo baahan yahay. Waxa kale oo aad ku dari kartaa mid si gaar ah loo qaabeeyey cagaha haddii aad u aragto inay lagama maarmaan tahay.
Si aad uhesho dheecaanka wajiga oo dhameystiran, tixgeli inaad iskudareyso qoyaan-qorahaaga serum. Halka kuwii hore ay ku sii jiraan lakabyada maqaarka dibedda, iyaga oo xoojinaya xayndaabkeeda biyuhu serum-ka ayaa si qoto dheer u dhex gali kara mahadnaqa qaab dhismeedkooda yar-yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Lakabyada maqaarka
Hope Sevillano dijo
Macluumaad wanaagsan oo ku saabsan maqaarka iyo in maskaxda lagu hayo. Waa muhiim in la ogaado sida maqaarku "u samaysan yahay" si loo daryeelo loona ilaaliyo. Waan kusii aqrinayaa. Dhamaan wanaag.
Jawaab Esperanza Sevillano